Antananarivo, 08 jona 2021: Natolotry ny UNICEF androany ho an'ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka ny « concentrateurs d’oxygène » miisa 200. Mararin’ny COVID-19 maneho “forme modérée” izay manaraka fitsaboana ny COVID-19 eny anivon’ny hopitaly natokana ho amin’izany no hisitraka ireny fitaovana ireny.
Ireo fitaovana 200 isa avy any amin'ny Sampan-draharaha famatsiana ao amin’ny UNICEF any Copenhague ireo dia hameno ireo « concentrateurs » 3.400, ka anisan’izany ireo fitaovana 1.400 novidiana niaraka tamin'ny UCP Banky Iraisam-pirenena ary 2.000 hafa avy amin'ny fandraisan’andraikitry ny filoham-pirenena (ahitana ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka). Hatao ho laharam-pahamehana ny fitsinjarana azy ireo any amin'ny tobim-pahasalamana isaky ny distrika, isam-paritra ary hopitaly foibe izay tena mila azy ireo indrindra.
« Tsy zava-baovaovo aminareo akory ny filazako hoe io valan’aretina io dia mbola fototry ny olana ara-pahasalamana eto Madagasikara ary tena mbola ao anatin’ny ady amin'ilay areti-mandringana Covid-19 tanteraka isika. Izany no antony mahatonga ny hery velona rehetra hitondra ny anjara birikiny hiatrehana izany ; tsy amelantsika raha tsy azontsika ny fandresena, » hoy ny fampahatsiahivana nataon’i Profesora Rakotovao Hanitrala Jean Louis, Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka.
« Ireo concentrateurs d'oxygène 200 ireo dia tsy vitan'ny hoe hanampy amin'ny ezaky ny governemanta mikasika ny famaliana ny filàna oksizenina amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 fotsiny ihany, fa hiantoka ihany koa ny fitsaboana tena ilaina ho an'ireo marary tsaboina nohon’ny aretina hafa, » hoy i Michel-Saint-Lot, Solontenan'ny UNICEF eto Madagasikara. « Amin'ny alàlan’ny fanamafisana ny rafi-pahasalamana eto amin'ny firenena dia hisitraka fitsaboana tsara kokoa ny marary, ny zaza vao teraka ary ireo zokiolona. »